Igodo Mgbanwe Need Chọrọ Ime na Nzukọ Gị Kwa Afọ Kwa Afọ | Martech Zone
Key Mgbanwe Need Kwesịrị Iji Mee Gị Kwa Afọ Sales igba-Off Nzukọ
Ọ na-na-na- na oge nke afọ ọzọ, mgbe ndị isi ahịa na ọrịre ahịa na-eme atụmatụ nzukọ ha na-ere kwa afọ. Ọ bụghị obere ọrụ. Na mgbakwunye na isi nke lọjistik nke na-ahọpụta ebe, igbochi ụlọ na-achọta ohere nzukọ, e nwere ihe a na-ekwu okwu mgbali elu afọ gara aga nzukọ. Kedụ ka anyị ga - esi mee ka ọ bawanye na mma? Kedu ndị ọbịa okwu ga-akpali? Kedụ ihe nrite ga-akachasị emetụta ndị na-eme anyị?
Anyị nwetara ya. Anyị agaala ọtụtụ n'ime ndị a n'onwe anyị maka ọrụ anyị, anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka imejuputa ndị otu ha otu site n'ịjụ: Gịnị ma ọ bụrụ na ị mere atụmatụ nzukọ gị site n'echiche ndị ahịa? Nke a bụ echiche ise ndị ahịa nwere ike ịnwale ime ka nzukọ afọ ọzọ bụrụ nke kacha mma:
Atụmatụ atụmatụ akaụntụ. Mgbe anyị chere banyere Strategic Accounts, anyị na-agbasaghị iche echiche nke anyị n'elu akaụntụ, ndị ahịa ndị na-azụ ihe ndị kasị anyị. Na nzukọ ebido, a na-ekenyekarị oge iji tụgharịa uche ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ enwere ike ree iji nwekwuo ego wee kwalite mmekorita ahụ. Nke a bụ ọrụ dị mkpa, mana nwere ike bụrụ ihe nzuzu ngwa ngwa-m, mụ, anyị. Ngwaahịa anyị, ọrụ anyị, akara ala anyị. Ntughari? Chegharia echiche banyere onye ị na-ewere ka ọ bụrụ akụkọ ihe mere eme gị Oke na Isi. Ndị ahịa gị nwere ike ịbụ nnukwu akaụntụ ndị ahụ zụrụ ma nwee ọmarịcha ngwaahịa na ọrụ gị. Mana ị kwesịrị ịtụle gụnyere ụfọdụ ndị ahịa gị kachasị oke: ndị ahịa ha na-eji ngwaahịa na ọrụ gị eme ihe ndị kachasị mma. Gwa ha ka ha sonyere na ndi otu ndi ahia ma juo ha ka ha kwuo maka ihe omuma ha.
Kpọọ ndị ahịa ka ha mata ndị na-eme ya kacha mma. Ndị na-ere ahịa na-arụsi ọrụ ike — ndị na-ere ahịa gị kachasị mma nwere ike ịbụ ndị dịpụrụ adịpụ n'ọhịa. Maka ebumnuche ndị a na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịmata ndị ọrụ gị kachasị elu n'ihu ndị ọgbọ ha. Tụlee ịkpọ ndị ahịa gị nke ukwuu ka ha kwuo maka ha — ọbụnadị nye ha onyinye. O nwere ike ịbụ otuto kacha mma otu gị nwere ike ịnata.
Ntughari ohuru na onodu onodu. Anyị na-anụkarị site n'aka ndị ahịa anyị na ha chọrọ ịkpali mmụọ. Ndị ahịa chọrọ ịrụ ọrụ na ndị ọkachamara na-ere ahịa nwere mkpali ndị nwere ike inyere ha aka iche echiche n'èzí igbe. Nke a bụ ebe analogị abanye. Iji wepụta nnukwu analog, chee echiche obere oge na otu okwu azụmahịa gị na-anwa imeri. Mgbe ahụ, tụlee ebe dị iche iche dị iche iche ebe ndị mmadụ chepụtara ụzọ iji dozie otu nsogbu ahụ. Lee otu ihe atụ:
Otu ndị anyị na ha rụkọtara echeghị na ha nwere njikọ zuru ezu na ndị ahịa ha. Ha chere na ọtụtụ ọrụ ndị mere ka ihe ịga nke ọma ndị ahịa ha mere na-eme n'azụ ihe, nke mere ka a ghara ịnwe mkpali nke otu. Analog: A na-eme nzukọ otu a na New Orleans, yabụ anyị kpọọrọ ha gaa n'otu ụlọ nri ama ama Emeril Lagasse. Dị ka otu a, ndị isi na ndị isi nri na-arụ ọrụ n'azụ ebe ahụ, mana ọ bụ ọrụ ha ka ndị ahịa na-ekpori ndụ. Ndị otu ahụ nọrọ na Executive Executive, ọtụtụ sous chefs na General Manager gbara ha ajụjụ maka ahụmịhe ha. N'ihi ya, ha malitere iche echiche dị iche iche banyere otu ha nwere ike isi soro ndị ahịa ha na-emekọrịta ihe ma nwee mkpali.
Mmelite na Ahịa na Ahịa. Anyị na-achọ imechi ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ gị na ndị ahịa gị, yana n'etiti ndị mmepe ngwaahịa gị, ndị ahịa gị na ndị ahịa gị. Kama ịkpọ ndị ahịa gị na ndị ahịa gị ka ha budata nke kachasị ọhụrụ na nke kachasị, gwa ha ka ha weta ozi ha yana pensụl dị nkọ, ma jiri oge mgbanye iji jikọọ ngwaahịa, ahịa, na ndị ahịa gị na ndị ahịa. Nke a na - arụ ọrụ nke ọma na Ntuziaka # 1 – ndị ahịa gị na Mainstream. Chee echiche banyere nke a dịka mkparịta ụka na-achọgharị ka gị na ndị ahịa banyere onyinye ọhụrụ na ị nweta nzaghachi nke oge site n’aka ndị kachasị mkpa-ndị ga-azụ ya.
Iwuli ulo. Ndụmọdụ ikpeazụ anyị metụtara iwulite usoro ọrụ ahịa gị. Ndị na-ere ahịa na-achọkarị ụzọ ha ga-esi mee ka ikike ha dị elu, meziwanye egwuregwu ha ma nwee ọganiihu. Nyere anyị isiokwu nke ndị ahịa-centricity, anyị ga-eso a ọkacha mmasị mmega nke anyị:
Anyị na-enwe mmasị iziga ndị na-ere ahịa ebe ha kacha nwee ọfụma — n'ọhịa! Ebe a na-ererere ụlọ ọrụ nyocha ebe ị na-ebido. Lee maka mkpọsa emmepe na-agbalị ịchọta abụọ n'ime a nkịtị vetikal na ndị dị ala na elu ọgwụgwụ. Dịka ọmụmaatụ, Tomụaka R Anyị na Wuru-a-Bear maka ihe ụmụaka ji egwuri egwu, Chevy na ụlọ ahịa Tesla maka ụgbọala, wdg. A na-emega ahụ kacha mma abụọ, ọrụ nke ọ bụla bụ ịga leta ụlọ ahịa ha abụọ ma lezienụ anya na ihe na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata aka ndị ahịa. Anyị na-ekwe gị nkwa na ndị otu gị ga-abịaghachi n'ike mmụọ nsọ site na ihe ịtụnanya (ma dị oke egwu) ihe ha nwetara ma nwee nghọta ọhụụ ha nwere ike itinye na mmekọrịta ndị ahịa ha.
Iche echiche banyere mgbachapụ nke onye ahịa gị nwere ike ime ka ọ dị mfe ma kpalie atụmatụ ịchụpụ gị ma duga na nsonaazụ na-arụpụta nke ọma yana afọ ọhụụ na-aga nke ọma. Anyị na-agba gị ume ịma jijiji gị ọzọ igba-apụ na-agbalị ndị a echiche na-gị ahịa nri ebe ha nwe: na etiti nke ihe niile.
Tags: nzukọ kwa afọ ahịamgbachapụịgba-apụ nzukọmmelite ahịaMmelite ngwaahịaire ahịanzukọ ahịaarụmọrụ ahịaire ahiaọzụzụ ahịaatụmatụ akaụntụ atụmatụndị isi ahịa
Ashley Welch na Justin Jones kwadoro Ntughari Somersault, alọ ọrụ na-ahụ maka iche echiche iche echiche na-enye ụzọ pụrụ iche maka mmepe ahịa. Ha bu ndi dere nzuzu nzuzu: ka echiche si eche echiche n’egosiputa ebum n’uche ndi ahia na nke inata ugbo ala. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na, www.somersaultinnovation.com.
Wzọ 3 iji nakọta stụ Anya data na LinkedIn Integrated Lead Generation Forms dị mfe
Ndi Enterprise IoT Ga-enyere Aka Kwụsị Industrylọ Ọrụ Mgbasa Ahịa?